musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nzira dzekuchengetedza dziri kuwedzera kune yavo yepamusoro timu
SecurityTrails, iyo Total Internet Inventory, iri kuwedzera kuchikwata chayo chekutungamira nekuunza Scott Donnelly seMutevedzeri weMutungamiriri weZvatengesi naTaylor Dondich saChief Technology Officer. Nhengo dzenguva refu dzenhengo dzeCourtney Couch naKris Lopez vanotora mabasa matsva ekutenderedza timu.
“Taylor naScott vari kujoina panguva yakafanira yeSecurityTrails. Nekuvhurwa kwechigadzirwa chedu cheAtack Surface Reduction, tiri kutora matambudziko akakura kumasangano makuru. Ruzivo rwavo ruchabatsira kuona kuti SecurityTrails nevatengi vayo vabudirira. ” - Chris Ueland, CEO weSecurityTrails.
Scott Donnelly anounza hupfumi hweindasitiri ruzivo, akabata makuru ekutengesa ekutungamira mabasa kuExpanse uye Recorded future. Munguva yake seMutevedzeri weMutungamiriri weTechnical Solutions paRecoded future, Scott akatyaira kubatanidzwa kwehungwaru hwavo hwekuchengetedza pamwe neakawanda eanotungamira IT uye zvigadzirwa zvekuchengetedza. Kuuya kwake kuSecurityTrails kuchave nechokwadi chekuti vatengi vanoona kukosha kweiyo Total Internet Inventory pasangano ravo rese.
Taylor Dondich anotora chinzvimbo seMutungamiriri Mukuru wehunyanzvi. Co-Muvambi Courtney Couch izvozvi anozotarisana nekutsvaga nzira dziri nani dzekuona vatengi zvivakwa uye njodzi mune rake nyowani basa seChief Innovation Officer.
Dondich akashanda munzvimbo yehunyanzvi kweanopfuura makumi maviri emakore nemakambani akaita seYahoo neSplunk, pamwe neVP yeUinjiniya yeMaxCDN. Ruzivo rwake mumabasa e tech Executive, chipangamazano uye mainjiniya anozotungamira SecurityTrails kugadzira tekinoroji nyowani uye kuona kuti vatengi havafi vakavharwa neziso risingazivikanwe njodzi.
Sezvo akamboshanda saStrategic Partnerships maneja kuSecurityTrails, Kris Lopez akawedzera bhizinesi kumashure pamwe nehunyanzvi hwekudyidzana uye manejimendi manejimendi manejimendi zvinomuita sarudzo yakasarudzika seMukuru weVashandi.
SecurityTrails iri kuunza shanduko idzi dzekushandisa kuti dzifambise kune inotevera nhanho uye nekuona kuti vanoramba vachipa yakanakisa dhata iripo kubatsira makambani kuzvidzivirira.